Sii Dhibaatadaada Macallinka, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Waxaa laga yaabaa inaad ogaato gabaygii hore ee ku bilowda ereyada Siiso sida ugu fiican ee Masterka, ma jiro wax kale oo u qalma jacaylkiisa. Waa xasuus cajiib ah iyo mid muhiim ah. Ilaah wuxuu u qalmaa sida ugu wanaagsan oo aan u siin karno. Laakiin markii aan ka fikirno arrintaas, Ilaah kaliya ma doonayo wanaaggeenna - wuxuu sidoo kale na weydiistaa inaan siinno waxa ugu xun.
1 Butros 5,7 waxaa naloo sheegay: Daryeelkaaga oo dhan isaga ha saarnaado; maxaa yeelay isagu dan buu idinka leeyahay. Ciise wuu ogyahay in aannan had iyo jeer ku jirin qaabka ugu wanaagsan. Xitaa haddii aan sannado badan Masiixiyiin nahay, welina waxaan haysannaa walwal iyo dhibaatooyin. Waxaan wali qalad sameynay. Weli waannu dembaabnaa. Xitaa haddii aan u heesno hees sida ugu fiican ee loo yaqaan 'Master your Master', ugu dambayntii waxaan siineynaa Ilaah ugu liita.
Kulligeen waan ku aqoonsan karnaa ereyadii rasuul Bawlos cutubkii 7aad ee warqaddii uu u qoray reer Rooma: Maxaa yeelay waan ogahay inaysan wax wanaagsan iga dhex jirin, taas oo ah jidhkayga. Waxaan rabaa, laakiin ma sameyn karo waxa wanaagsan. Sababta oo ah wanaagga aan doonayo, anigu ma sameeyo; laakiin xumaanta aanan rabin, anigu waan sameeyaa. Laakiin haddaan sameeyo waxa aanan doonayn, dembaabaa, laakiin dembiga igu dhex jira ayaa ah (Rooma 7,18-20).
Kulligeen waxaan dooneynaa inaan intii karaankeena ah u sameysanno Ilaah, laakiin ugu dambeyntii waxaan siinnaa kuwa ugu xun. Taasina waa sax. Ilaah wuu yaqaan dembiyadeenna iyo qaladaadkeenna, wuuna inaga dhaafay wax kasta oo ku jira Ciise Masiix. Wuxuu doonayaa inuu na ogaado inaanu jecel nahay oo uu ina daneeyo. Ciise wuxuu noo sheegayaa: ii kaalaya kulligiin kuwiinna hawshaysan oo culaabaysanow; Waxaan rabaa inaan ku qanco (Matayos 11,28). Sii waxyaalaha aad ka walwasho ee Ilaah - uma baahnid iyaga. Cabsidaada Eebbe ha siiyo. Sii cabsi, cadhadaada, nacaybkaaga, qadhaadhkaaga, niyad jabnimadaada, xitaa dembiyadaada. Maaha inaanu qaadno culayska waxyaalahan, oo Ilaahay na ma doonayo inaanu dhawrno. Waa inaan u dhiibnaa ilaahay sababtoo ah wuxuu doonayaa inuu naga qaado, isaguna waa kan kaliya ee si sax ah u tuuri kara. Ilaahay sii dhammaan caadooyinkaaga xun. Isaga xanaaqaaga oo dhan, fikirradaada qalloocan oo dhan, iyo dabeecadahaaga balwadda lehba. Isaga dembiyadiinna oo dhan iyo dembigaaga oo dhan.
Waa maxay sababta? Maxaa yeelay Ilaahay ayaa horay u bixiyay. Isaga ayaa iska leh, sidoo kale, ma fiicna inaan ku sii hayno. Marka waa inaan ka tagno waxayagii ugu xumaa oo aan wax walba gacanta u gelinaa Ilaahay. Sii dembigaaga oo dhan ilaahay, dhamaan waxyaabaha xunxun ee aynaan ahayn inaan usameyno sida Eebbe doonayo. Isagu wuu ku jecel yahay wuuna doonayaa inuu ka qaado gacmahaaga. U oggolow isaga inuu haysto wax walba.
Kama qoomamayn doontid.